नेपाल र अमेरिकामा कानुनी सेवा दिने लक्ष्य छ : नेभिन क्षेत्री, कानुन व्यवसायी – Everest Times News
अमेरिकामा जन्मेका कमै युवाहरु प्रस्ट नेपाली बोल्छन् । नेपाल जन्मेर अमेरिका आएका कतिपय बालबालिकाहरु नेपाली बोल्न छाडेको बेला नेभिनजस्ता यही जन्मेका कतिपय युवाहरु नेपाली भाषा ध्यान सिकेर बोल्न थालेका छन् । सानैदेखि नेपाली बोल्दै आएका नेभिन क्षेत्री नेपालीहरुसँग कामकुरा गर्न निकै खुसी मान्छन् । उनी बुबा नेपाली समुदायका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी खगेन्द्र क्षेत्रीको पदचिह्न पछ्याउँदै वकिल भएका छन् । उनी अहिले क्षेत्री एण्ड एसोसियटमा छुट्टै च्याम्बरमा अमेरिकी कानुनको किताब पल्टाउँदै कानुनी सेवा अभ्यास गर्दैछन् ।
न्युयोर्कमा जन्मेर न्युजर्सीबाट हाइस्कुलको अध्ययन सकेका २७ वर्षीय नेभिनले न्युयोर्कको एनवाइयु कलेजबाट इकोनोमिक्स र पब्लिक पोलीसी म्यानेजमेन्ट विषयमा ब्याचलर डिग्री गरेका थिए । अमेरिकी नेपाली समुदायमा युवापुस्ताबाट कानुन व्यवसायी हुन लागेका नेभिनसँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि आङछिरिङ शेर्पाले गरेको कुराकानी:
अमेरिकामै जन्मे पनि कसरी यति राम्रो नेपाली भाषा बोल्न सकेको ?
म सानो छँदा घरमा आमाबुबासँग नेपालीमै कुराकानी गर्थेँ । स्कुलमा फरक भाषा बोले पनि आमाबुबासँग र बिदाको बेला नेपाल गइरहन्थेँ । नेपाल गएपछि आफन्तहरुसँग नेपाली बोल्ने क्रममा मैले नेपाली सिक्दै आएँ । भाषा भन्ने कुरा मुख्य अभ्यास नै रहेछ । परिवारसँग र नेपाल जाने आउने गर्दा सबै जनासँग बोल्दै गर्दा जानेको हो । भाषा फरक उच्चारण भए पनि थरिथरिका व्यक्तिहरुसँगको सम्पर्कले मलाई नेपाली बोल्न निकै सघाउ पुग्यो ।
कसरी वकिल हुन पुग्नुभयो ?
मैले ग्राजुयट गर्नु भन्दा अघि मात्र वकिल बन्छु भनेर लागेको हुँ । त्यो भन्दाअघि फाइनान्सतिर लाग्छु भन्ने थियो । ल फर्ममा इन्टर्न गर्दादेखिन वकिल हुन मन लागेको थियो । हाइस्कुलदेखि नै बुबाको अफिसमा कानुनी सेवाबारे काम पनि गरेको थिएँ । ल क्षेत्रमा पनि धेरै फिल्ड छ । त्यसमध्ये इमिग्रेसन र विजनेस लगायतका ४ फिल्डको बारेमा सिकेर काम गर्ने योजना बनाएको छु ।
सानो उमेरमै वकिल हुँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
मलाई अहिले सञ्चो जस्तो भएको छ । मुख्यकुरा बारको जाँच सकेर उपलब्धि हात पार्न पाउँदा सञ्चो महसुुस भएको छ । बारको जाँच दिनको ६ घण्टाको दरले दुई दिन दिनु पथ्र्यो । निकै कडा थियो । त्यो जाँचमा पास भएन भने अर्को ६ महिना कुर्नु पथ्र्यो । बारको जाँच सकेर वकिल हुन पाउँदा निकै आनन्द लागिरहेको छ । अब कसरी राम्रो वकिल हुने भनेर सिक्नमा केन्द्रित छु ।
मेरो योजना मुख्य दुइटा छन् । एउटा राम्रो वकिल बन्न सिक्ने र कसरी कामहरु कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । दोस्रो हाम्रो साइडको टेक्निोलोजी भेन्चर यो भर्खर दुई वर्ष भयो खोलेको । नेपालसँंगै इन्डियामा कार्यालय खोलेको छु । यो नेपालमा सुरक्षा, बैंकिङ, होटल, बिमा आदि क्षेत्रको प्रोजेक्टहरु बनाउँदै आएको छ । हाम्रो प्रोजेक्टअनुसार नेपाललाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर योजनाहरु बनाउँदै छु ।
अहिलेका युवा पुस्तालाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
युवाहरु जहाँ भए पनि सबैभन्दा पहिलो त पढाइलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । पढाईसँगै सिक्ने भनेको इन्टर्नसीप र भोलेन्टर नै हो । पढेको, देखेको र सुनेको भन्दा पनि आफैंले काम गरेपछि साँच्चिकै धेरै सिकिँदोरहेछ । इन्टर्नसीपबाट भित्र प्राविधिक अनुभव मिल्छ । यो कि हाइस्कुलमा वा कलेजमा गर्नु पर्छ । यस्तो किसिमको इन्टर्न गरेमा भविष्यमा जुन फिल्डमा जान चाहे पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
पढाइसँगै फुर्सदमा के गर्नुहुन्छ ?
पढाईसँगै फुर्सदमा यात्रा गर्न मन लाग्छ । मलाई मन पर्ने यात्रा भनेको नेपाल हो । नेपालमा यात्रा गर्दा डाइरेक्ट प्mलाइट छैन । बीच बाटोमा पर्ने ट्रान्जिटमा रोकिरहेको बेला हङकङ, यूकेजस्ता देशमा रहेका साथीहरुलाई सम्पर्क गरी केही दिन घुमेर नेपाल जाने गरेको छु । यसको साथै स्कुलदेखिन फुटबल र बास्केटबल खेल्दै आएकोले कलेजमा पनि फुटबल र बास्केटबल खेल्छु । यसको साथै घरमै म्युजिक रेकर्डहरु संकलन गरेर नयाँ नयाँ संगीत उत्पादनको अनुभव लिने गर्छु ।